'आउटडोर' सुटिङमा अभिनेत्रीका दु:ख - फिचर - कान्तिपुर समाचार
'आउटडोर' सुटिङमा अभिनेत्रीका दु:ख
फाल्गुन २५, २०७६ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — गीतको सुटिङ सुरु हुनै लागेको थियो, अभिनेत्री केकी अधिकारीले निर्माण टिमतिर आँखा घुमाइन् । टिममा कोही महिला देखिनन् । त्यसपछि स्टूडियोजस्तो देखिने कोठामा एक्लै गइन्, लुगा फेर्न । कोठाको माथिल्लो भागमा हावा पस्‍ने झ्यालजस्तै बनाइएको थियो ।
लुगा फेरेर बाहिर निस्कन लाग्दा केकीको आँखा त्यहीँ झ्यालमा पर्‍यो । कसैले आफूलाई चिह्‍याइरहेको चाल पाइहालिन्, जब त्यो झ्यालबाट हत्त न पत्त एकजना व्यक्तिले आँखा उठाए ।
सुरुमा त आत्तिइन् । बाहिर निस्केर त्यो व्यक्तिलाई आँखा तरिन् पनि । तर, उसले आफूले नहेरेको भाव अनुहारमा देखायो । उनले त्यसबारे निर्माण टिमका कसैलाई भन्‍न सकिनन् । भर्खरै इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेकी थिइन्, त्यसैले त्यो घटनाबारे बोल्ने आँट गर्न सकिनन् । घटनाको ८ वर्षपछि बल्ल उनले यो घटनाबारे बोल्ने साहस जुटाएकी छिन् ।
यस्ता सयौं झमेला छन्, अभिनेत्री र महिला टेक्‍निसियले दैनिक आफ्‍नो काममा भोग्‍ने, जसबारे न कसैले चासो लिन्छ न उनीहरूले नै कसैलाई भन्छन् । बरु विस्तारै यसलाई सामान्य मान्दै जान्छन् ।
अहिले भने केकी 'आउटडोर' सुटिङमा पहिरन फेर्नुअघि यस्तो चिहाउन मिल्ने झ्यालहरू कहिँकतै छन् कि भनेर सतर्क हुन थालेकी छिन् ।
सन् २०१० मा 'स्वर' फिल्मबाट ठूलो पर्दामा डेब्यु गर्दा पनि सुटिङमा लुगा फेर्न निकै समस्या परेको केकी बताउँछिन् । त्योबेला जसोतसो काम चलाइन् । यस क्षेत्रमा १० वर्ष बिताइसक्दा समस्या उस्तै देख्छिन् केकी । अझै अभिनेत्रीलाई 'आउट डोर' सुटिङमा पहिरन बदल्ने उचित व्यवस्था छैन ।
केहीदिनअघि मात्र केकीलाई यस्तै आपत पर्‍यो, गीतको सुटिङमा । लुगा फेर्ने उचित स्थान नभेटिएपछि सुटिङस्थल वरपरको घरको दैलोमा अनुरोध गर्न पुगिन् । बल्लतल्ल लुगा फेर्ने कोठा भेटिन् । म्युजिक भिडियोको अधिकांश सुटिङमा केकी यसरी नै दर्शकको घरमा पुगेर लुगा फेरिरहेकी हुन्छिन् ।
फिल्म 'भेरै'को सुटिङका क्रममा अभिनेत्री सुरक्षा पन्त रजश्वला भइन् । मेकअप आर्टिस्टलाई सोधिन्, 'प्याड बोक्‍नु भाएको छ ?' मेकअप आर्टिस्टले प्याड बोकेका रहेनछन् । त्यसपछि सुरक्षालाई चिन्ता पर्‍यो । किन्‍न पठाउँ, फिल्मको सुटिङ डाँडामा भइरहेको थियो । पसल पुग्‍न समय लाग्‍ने देखिएपछि मेकअप पुछ्‍ने कपासलाई प्रयोग गरिन् । त्यसदिनको समस्या टर्‍यो । तर, कतै आपत परिहाले यही अवस्था रहेको सुरक्षा बताउँछिन् ।
फिल्म 'कान्छी'को सुटिङमा मुस्ताङ पुगेकी श्‍वेता खड्कालाई अर्को समस्या पर्‍यो । मुस्ताङका डाँडातिर शौचालय थिएनन् । शौचालय जानुपर्ने अवस्था आउला भनेर उनी दिनभर पानी पिउँदिन थिइन् । अलिकति पानी पिएर प्यास मेट्थिन् ।
'कान्छी' फिल्मको सुटिङमा मात्रै होइन अन्य फिल्मको सुटिङमा पनि यस्तै गर्थिन् श्‍वेता । 'आउटडोर' सुटिङको प्रमुख समस्या नै शौचालय रहेको अधिकांश अभिनेत्रीको अनुभवले बताउँछ । उनीहरू पानी नपिएरै यो समस्याको समाधान गर्छन् । शरीरमा पानी नपुग्दा हुने समस्याबारे उनीहरू यसै पचाइदिन्छन् ।
समाधान खोइ त ?
सार्वजनिक शौचालयको अभावकै कारण पनि 'आउटडोर' सुटिङमा महिला कलाकारहरूलाई ठूलो समस्या हुने गरेको केकी बताउँछिन् । 'शौचालय त मुख्य समस्या नै हो नि । दिनभरी पानी नपिएरै काम गर्छौं हामी । त्यसो गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिने नै भयो । कति समय त सुटिङमा कृत्रिम शौचालय बनाएर प्रयोग गर्‍यौं,' उनले भनिन्, 'हामीसँग सार्वजनिक शौचालय नभएको कारणले पनि यस्तो समस्या भएको हो । अहिले मैले बुझ्दाखेरी सार्वजनिक शौचालय नभएर सर्वसाधारणले भोग्‍ने समस्या नै एउटा कलाकारले भोग्‍नु परेको रहेछ ।'
फिल्म क्षेत्रले ५ दशक पूरा गर्दा पनि सुटिङस्थलको यस्तो समस्याबाट वाक्क भइसके अभिनेत्रीहरू । श्‍वेता त सुटिङको समयमा टेन्टबाट मेकअप कोठा अनि शौचालय बनाउँछिन् । टेन्टभित्र लुगा फेर्ने व्यवस्था मिलाउँछिन् । यो समास्या समाधान लागि फिल्मकर्मीले भ्यानिटी भ्यानको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ । 'अब त राम्रो ब्यानरले भ्यानिटी भ्यान राख्दा राम्रो हुन्छ,' उनले भनिन् ।
केकी पनि भ्यानिटी भ्यान नै यो समस्याको समाधान रहेको बताउँछिन् । 'हामीसँग ओभियु भ्यान पनि छैन । त्यसकारण त्यो पनि समस्या हो । पुरुषले त सजिलै कपडा फेर्न सक्छन् । महिलाहरूलाई अलि गाह्रो पर्छ । यो समस्या सबैले भोग्‍ने समस्या हो,' उनले सुनाइन्, 'गाडी नै नपुग्‍ने ठाउँमा सुटिङ गर्न जाँदा भने पहिरन पनि उतै फेर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक स्थानमा त्यसरी पहिरन बदल्दा कसैले फोटो खिचिहाल्ने पनि डर हुन्छ ।'
'आउटडोर' सुटिङमा अभिनेत्रीले रजश्वला हुँदा पनि दु:ख पाइरहेका हुन्छन् । हुन त निर्माण टिम विभिन्‍न औषधिसहित सुटिङमा गएको हुन्छ । तर, यसमा स्यानेटरी प्याड पनि लैजाने चलन अझै सुरु भएको छैन । प्राविधिकको टिममा अधिकांश पुरुष हुने भएकोले पनि समस्या देखिएको अभिनेत्रीको गुनासो छ । स्यानेटरी प्याड त अभिनेत्रीहरू आफैं पनि बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ रजश्वला मिती अगाडि पछाडि भइदिन्छ । कहिलेकाहीँ प्याड बोक्‍न भुल्छन् अभिनेत्रीहरू । त्यस्तो अवस्थामा सुटिङ सेटमा यसको व्यवस्था नहुँदा निकै अप्ठ्यारो हुने गरेको केकी बताउँछिन् ।
'औषधिहरू सबै बोकेको हुन्छ प्रोडक्सन टिमले । ब्याकअपमा स्यानेटरी प्याड पनि राख्‍नुपर्छ भन्‍ने ठान्दैनन् । खोइ अप्ठ्यारो लाग्‍ने हो कि के हो । जब कि त्यो कुनै पनि किसिमको बिरामी होइन,' उनले भनिन्, 'हामी सजिलै कहिलेकाहीँ प्याड किन्‍न पठाउँछौं कति प्राविधिकलाई । तर ल्याउने मान्छेले सजिलै ल्याउँदैन । त्यसलाई बम जसरी बेरेर लिएर आउनु हुन्छ । केही हदसम्म परिवर्तन त आ'को छ ।' यस्तो अवस्थामा अभिनेत्रीहरू आफै पनि सजग हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
अभिनेत्री रेखा थापा फिल्म निर्माणमा करोडौं खर्चने निर्माण टिमले शौचालय अनि लुगा फेर्न टेन्ट खडा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । 'एक त अभिनेत्रीहरूले पनि आफ्नो समस्या प्रोडक्सन टिमलाई भन्‍नु पर्‍यो । अनि करोडौं खर्चने प्रोडक्सन टिमले पनि २० हजारको टेन्ट त बनाइदिन सक्छन् नि ।'
'आउटडोर' सुटिङमा विशेषत अभिनेत्री असुरक्षित हुने गरेको सुरक्षा बताउँछिन् । 'कहिलेकाहीँ रातिसम्म सुटिङ हुन्छ । हामीलाई त्योबेला पनि असुरक्षा अनुभव हुन्छ,' उनले सुनाइन् ।
गीतको सुटिङभन्दा पनि फिल्ममा ठूलो टिम हुन्छ । ठूलो टिममा हिजोआज कति फिल्मले भीड सम्हाल्ने सुरुक्षाकर्ता राख्‍न थालेका छन् । भीडबीच सुटिङ गर्दा असुरक्षित अनुभव गर्छन् अभिनेत्रीहरू ।
सुटिङ भइरहँदा भीडमा रहेका दर्शकको नराम्रो प्रतिक्रिया सट दिन तयार अभिनेत्रीको कानमा ठोकिन्छ । यस्ता कमेन्टलाई बेवास्ता गर्छिन् अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी । 'भीडबाट दर्शकले होच्याउने, जिस्काउने गर्नुहुन्छ । अनि हामीले त्यो सबै नराम्रो व्यवहारलाई बेवास्ता गरेर काम गर्नुपर्छ,' उनले आफ्‍नो अनुभव साटिन् ।
भीडमा असुरक्षा देख्छिन् केकी पनि। 'कहिलेकाहीँ भीडमा सुटिङ भइरहेको हुन्छ । हामी दर्शकको छेउमै हुन्छौं । सेल्फी लिने बहानामा छोएर, अंगाल्नै मार्न खोज्नुहुन्छ उहाँहरु । हामीसँग अनुमति पनि लिनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्न, आफ्‍नो सम्पत्ति ठान्‍नुहुन्छ,' केकीले अनुभव सुनाइन् ।
'आउडडोर' सुटिङको अर्को समस्या हो, पहिरन । अभिनेत्रीहरू सुटिङमा मौषम विपरित पहिरन लगाउन लगाइन्छ । जस्तो, पुसको जाडोमा पनि कालिञ्चोकमा गएर छोटो कपडामा सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।
'हामीले छोटो कपडा लगाएर सुटिङ गर्नुपर्छ, जाडोमा पनि । जब कि वास्तविक जीवनमा कसैले त्यस्तो अभ्यास गर्दैन । अभिनेत्रीलाई ग्ल्यामर्स देखाउनुपर्छ भन्‍ने मानसिकता छ तर साथै उसको स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन,' केकी सुनाउँछिन् ।
केकीको भनाइमा वर्षा सिवाकोटी पनि सहमत छन् । 'छोटो कपडा लगाएर सुटिङ गर्न हामीलाई धेरै गाह्रो पर्छ,' उनले भनिन् । शारीरिक असुरक्षामात्र होइन, अभिनेत्रीको प्रमुख समस्या त समाजले गर्ने टिप्पणी पनि हो । सुटिङ गरेर ढिला घरभित्र आउँदा उनीहरूको चरित्रमाथि समाजले औँला उठाउँछ ।
'९ बजेपछि एक किसिमको डर हुन्छ । दिउँसो घर जुन तरिकाले ढुक्कसँगले जान्छौं नि राति कुनै काम अनि कार्यक्रमबाट फर्कँदा एक किसिमको डर हुन्छ,' केकीले भनिन्, 'नेपालको सन्दर्भमा महिलालाई हेर्ने नजरमा फरक छ नि त ।'
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ १२:५४
(कालीकोट) — वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी खनिएका सडकका कारण जलीय जीवजन्तु लोप हुने अवस्थामा पुगेका सरोकारवालाले बताएका छन् । खाँडाचक्रमा आयोजित स्थानीय जलचर तथा जैविक विविधता संरक्षण ऐनको मस्यौदामाथिको छलफलमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
‘चार–पाँच वर्ष अघिसम्म तीला नदीको तिरमा पानीओत र जलेवा देखिन्थे,’ शुभकालिका गाउँपालिका–४ का माछा व्यवसायी गोविन्द चौलागाईँले भने, ‘आजकल ती जलचर देख्न निकै मुस्किल हुने गर्छ ।’ अध्ययनअनुसार तीला नदीमा २९ प्र्रजातिका असला जातका माछा पाइने भए पनि अहिले त्यो संख्या घट्दै गएको उनले बताए ।
तीला र कर्णाली नदीमा जलचरको संख्या घटिरहेको अवस्थामा खाँडाचक्र नगरपालिकाले जलचर संरक्षण ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । ऐनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै तिला–कर्णाली जलाधारविज्ञ भोला ढकालले तीला नदीमा असला माछा पहिलेको तुलनामा घटेको अभ्ययनबाट देखिएको बताए । वातावरणीय प्रदुषण, बढ्दो जनसंख्या, घातक माछा मार्ने विधि (खोलामा करेन्ट लगाउने, बम विस्फोट गर्ने) नदीबाट अव्यवस्थित रूपमा गिटी, बालुवा उत्खनन गर्नेजस्ता मानव सिर्जित समस्याले जलीय जीवजन्तु संकटमा परेका उनले बताए । वातावरणीय नीति तथा कानुनविज्ञ नारायण बेल्वासेले सबैभन्दा बढी प्रभाव विकासका नाममा हुने बेथितिले निम्त्याएको बताए ।
खाँडाचक्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया बिष्टले माछाको संरक्षणका लागि विशेष अभियान चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । किर्डाक नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक नवीनकुमार शाहीले जथाभाबी विकासको असर वातावरणमा परेको र त्यसले जीवजन्तु र जलचर जोखिममा परेका बताए । पानीका मूल रिचार्ज गर्न लेकाली भेकमा रिचर्ज पोखरी बनाउने अभियानै चलाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७६ १२:५१